WARBIXIN: Ciyaaryahan Caan Ah Oo Ku Biiray Kooxda Daacish Oo Duqeyn Lagu Dilay [Sawiro] » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Featured/WARBIXIN: Ciyaaryahan Caan Ah Oo Ku Biiray Kooxda Daacish Oo Duqeyn Lagu Dilay [Sawiro]
Shan sano ka hor, ayay ahayd markii sheekadda ciyaaryahan Burak Karan, ay soo ifbaxday wuxuuna ahaa wiilkaan mid usoo dheelay xulka kubada cagta Germany, gaara ahaan kuwa ay da’doodu ka hooseyso 16 iyo 17-sano jir.
Karan ayaa wuxuu ku dhashay Magaalada in Wuppertal oo ka tirsan Gobolka North-Rhine Westphalia, sanadkii 1987, wuxuuna soo maray kooxo kadan oo ay kamid tahay: Bayer Leverkusen, isagoo lasoo dheelay ciyaartoyda kala ah: Sami Khedira, Kevin-Prince Boateng iyo Dennis Aogo.
Kooxaha uu soo marey sidoo kale waxaa kamid ah: Hertha Berlin, Hamburg iyo Aachen.
Isagoo 20-sano jir ah ayaa wuxuu joojiyay heshiiskii uu kula jiray kooxda kubada cagta Aachen, isagoo uduulay Woqoyga Afrika, halkaasoo uu uga biiray Kooxda Jihaadoonka, isagoona ay wehlineysa xaaskiisa oo caruur usidey.
Woqoyga Afrika intii uu ku sugnaa ayaa waxaa loo diyaariyay inuu dagaalamo, waxaana uu uduulay wixii intaas ka dambeeyay Goobaha dagaalada ee dalka Syiria, waxaana tababarka uu qaatey ay kamid ahaayeen Taaktikooyinka dagaalka.
Masuuliyiinta ayaa kadib waxay bilaabeen inay baadi goobayaan Karan, waxaana lasoo saaray digniino ku aadan isaga, isagoona noqday mid aad loo raadiyo, laakiin ugu dambeyn waa la xaqiijiyay.
Sanadkii 2013, Karan oo kula dagaalamaya koox daacad u ah Madaxweynaha Suuriya ee Bashir al-Assad, Xuduudka Suuriya iyo Turkiga, gaara ahaan Magaalada Azaz, oo ku taala Woqoyga Magaalada Xalab, ayaa halkaas dilay.
Dilka Karan, ayaa waxaa uu yimid kadib markii Kooxdii uu isaga udagaalamayay lagu duqeeyay Fariisinkooda, waxaana sidaas sameeyay Diyaaradaha dagaalka ee dowlada Suuriya.
Burak Karan Daacish Germany ISIL